Inona no biraon'ny vavahady vy?
Tabilaon'ny vavahady. Ny rindrin'ny vavahady dia rafitra ambany ambany, misy tsanganana sy tohotra mitsivalana na miorina amin'ny rindrina, mifandray amin'ny fifandraisana tsy maharitra ... Ity endrika firafitry ny rafitra mitohy ity dia miorim-paka ao anaty fiaramanidiny ary manome elanelam-potoana mazava tsy voasakan'ny bracing.
Ahoana ny fananganana tranobe vy?
Ny rafitry ny vy dia teknikan'ny fananganana miaraka amin'ny "vatan-kazo" amin'ny tsanganana vy mitsangana sy ny vatan-tsipika mitsivalana, namboarina tamina vatan-tsipika mahitsizoro hanohanana ny gorodona, ny tafo ary ny rindrin'ny trano iray izay miraikitra amin'ny sary. Ny fivoaran'ity teknika ity dia nahatonga ny fanamboarana ilay trano ambony indrindra azo tanterahina.
Maninona no mampiasa firafitra vy?
Satria manana tombony maro ny firafitry ny vy. Voalohany, tanjaka avo. Ny refy avo lenta amin'ny tanjaka amin'ny lanjany (ny tanjaka isaky ny lanja iray). Faharoa, ductility tena tsara sy fanoherana seismika. Mahazaka deformation be tsy misy tsy fahombiazana na dia eo ambany fihenjanana mafy aza. Fahatelo, elastika, fitoviana ara-nofo. Famaritana ny fananana, akaiky ny fiheverana endrika. Fahefatra, fanamorana ny fanamboarana sy ny hafainganan'ny fananganana.
Ahoana ny fomba hisorohana ny atody vy sy ny fivoahan'ny rindrin'ny atrikasa fananganana vy?
Ny fomba tsara indrindra hampijanonana ny famoahana dia alohan'ny hanombohany. Ity ny fomba hampijanonana ny tafo vy sy ny famoahana rindrina:
1. Misafidiana kitapo fananganana vy avo lenta. Ny rafitra fananganana vy rehetra dia tsy noforonina mitovy. Ny rafi-trano vy ataon'ny RHINO, ohatra, dia misy lafin-javatra tsy voavolavola maromaro natao hiarovana ny trano tsy misy olana.
Voalohany indrindra, ny famolavolana vy mafy orina eo amin'ny sehatry ny varotra dia miaro amin'ny fahasimban'ny oram-be sy ny lanezy.
Faharoa, ny RHINO dia misy takela-by metaly manara-penitra milanja taolam-bolo (PBR) avo lenta ao anaty fonosana mahazatra, tsy misy vidiny fanampiny. Ny takelaka PBR dia manome tanjaka lehibe kokoa ary fifandimbiasana lalindalina kokoa eo anelanelan'ny takelaka, ho an'ny hoditra fananganana mafy orina kokoa noho ireo ravina R mahia izay ampiasain'ny tranobe metaly mora vidy.
Fahatelo, ny RHINO dia misy volo avo lenta, fandavahana tena, familiana tsy harafesina miaraka amin'ny mpanasa lamba maharitra ho fiarovana manokana.
2. Atsofohy tsara ny visy. Tsy misy rafitra mifatotra mifehy tsara raha tsy apetraka tsara ny visy.
Voalohany, ny visy dia tsy maintsy mamely ny firafitra vy eto ambany. Raha malahelo ny purlin na ny akanjo ny visy dia tsy manisy tombo-kase ilay mpanasa lamba ary tsy azo ihodivirana ny fivoahana.
Faharoa, mba hisorohana ny famoahana ireo visy mandrehitra tena izay mametaka tafo vy sy rindrina amin'ny rindrina dia tsy maintsy atsofoka mahitsy fa tsy miolakolaka.
Fahatelo, ny visy miaraka amin'ny mpanasa lamba dia tsy maintsy atsofohy amin'ny halaliny. Raha mihidy mafy ny tombo-kase, dia mety hivoaka ny famoretana tafahoatra. Raha tsy ampy henjana, dia tsy miendrika tombo-kase ilay mpanasa lamba ary mety mitete.
Rehefa apetraka sy voatazona tsara dia tsy tokony ho tafaporitsaka mihitsy ny fatotra RHINO.